Bandhigga soo nooleeynta dhaqanka oo maanta lagu qabtay Muqdisho “Sawirro” – Radio Muqdisho
Bandhigga soo nooleynta farshaxanka iyo dhaqanka oo maalmahan ka socday gobolka Banaadir ayaa galabta lagu qabtay garoonka kubadda Kolayga Wiish ee magaalada Muqdisho.
Bandhigan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska taasoo qayb ka ah soo nooleynta Farshaxanka iyo dhaqanka oo maalmahaan ka socday Magaladda Muqdisho,.
Waxaa ka qaybgalay bandhigga dhinyaro ku tartameysay Farshaxanka, ,heesaha ciyaaraha iyo sheekooyinka kuwaasoo ka kala yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Koxda Tigwaandowga ee X.S.T ayaa soo banadhigtay Ciyaar Karatee iyo Tigwaandoo ay dadku aad u jecleysteen,Kooxda Fankaloorka ee Hobalada Qaranka ee waaberi iyo Kooxda Banaadir Band ayaa Ciyaaraha Hiddaha iyo dhaqanka iyo Dab ismariska iyo Heeso ka tarjumaayo Dhaqanka ku soo bandhigay madasha..
Gudoomiyaha Degmada C/siis Cusmaan Muxyadiin Cali ayaa ka mahadceliyey bandhigaan oo dhalinta lagu baraayo dhaqankooda suubban, wuxuuna ku amaanay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dadaalka ay ugu jirto soo nooleynta dhaqanka faca weyn ee Soomaaliyeed.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo Dalxiiska C/llaahi Colaad Rooble oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go’antahay la dagaallanka dhaqamada shisheeye ee xun xun, isagoo kula dar daarmay dhallinyarada Soomaaliyeed iney bartaan dhaqankooda suubban kuna faanaan,, waxuuna hoosta ka xariiqay in wasaaraddu ay dadaal dheeraad ah ku bixin doonto arrintaasi la xiriirta soo nooleynta dhaqanka.
Wasiirka Wasaaradda Dhalinyada iyo Sportiga Mudane Maxamed C/llahi Xasan Nuux oo isagana ka hadlay Bandhigga ayaa sheegay in Dawladda Soomaaliya ay ka go’an tahay la dagaallanka waxyaabaha Xun ee liddiga ku ah dhaqankeena Soomaaliyeed, wuxuuna aad u amaanay dhalinyaradii ka qeybgashay bandhiggan.
Bandhigaan ayaa waxaa uu socon doonaa muddo Afar bilood ah, waxeeyna Dawladda Soomaaliyeed uga golleedaha dib u soo nooleynta dhaqanka iyo Hiddahii Ummadda Soomaa
Sawir Qaade C.laahi Muxuyadiin Codka.
Xoghayaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Kolayga oo xilka laga qaaday +Sawirro